स्व. कञ्चन प्रियदर्शीको सम्झनामा कविता प्रतियोगिता हुने - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ स्व. कञ्चन प्रियदर्शीको सम्झनामा कविता प्रतियोगिता हुने
स्व. कञ्चन प्रियदर्शीको सम्झनामा कविता प्रतियोगिता हुने
Sindhu Khabar आईतबार, २०७८ भदौ १३ / १७:०३
चौतारा । पत्रकार एवं साहित्यकार स्व.कञ्चन प्रियदर्शीको जयन्तीको अवसर पारेर सिन्धुपाल्चोकमा खुला कविता प्रतियोगिता हुने भएको छ । आउँदो भदौ २६ गते प्रियदर्शीकै जन्म गाउँ पीपलडाँडामा कविता प्रतियोपिगता गरिन लागिएको हो ।
प्रियदर्शीको सम्झनामा निर्माण गरिएको शहीद स्मृति पर्यटकीय पार्कको उद्घाटन गरिने कार्यक्रममा यस्तो प्रतियोगिता राखिएको छ । कञ्चन स्मृति साहित्य प्रतिष्ठानको आयोजनामा हुन लागेको कार्यक्रममा दुःखी प्रकाशनको सिन्धु मित्र बाल साहित्य पुरस्कारसमेत अर्पण गरिने छ ।
सो कार्यक्रममा प्रियदर्शीको सालिकसमेत अनावरण गरिने आयोजक प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतियोगितामा सहभागी हुन प्रतियोगीहरुले आउँदो भदौ २० गते भित्र आयोजकले तोकेको इमेल ठेगानामा कविता आइपुग्नुपर्ने छ । इमेल सम्भव नचए चौतारामा रहेको सर्वपक्ष दैनिकको कार्यालयमा कविता दर्ता गराउनुपर्ने आयोजकका सुरेश कसजूले जानकारी दिए ।
‘कविता स्वेच्छिक विषयमा लेख्न पाइने नियम बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘भदौ २० भित्र आएका कवितालाई पहिलो चरणमा मूल्यांकन गरिनेछ ।’ उनले दोस्रो चरणका लागि सात कविता छनोट गरि वाचनका लागि खबर गरिने बताए ।
कविता [email protected] मा सम्प्रेषण गर्न आयोजकले अनुरोध गरेको छ ।